5 Astaamood Oo Hoosta Ka Xariiqeysa In Al-Shabaab Ku Guuleysaneyso Dagaalka. W/Q Hilaal Colaad - FOOLAAD MEDIA
Home » Aragtida Dadweynaha » 5 Astaamood Oo Hoosta Ka Xariiqeysa In Al-Shabaab Ku Guuleysaneyso Dagaalka. W/Q Hilaal Colaad
5 Astaamood Oo Hoosta Ka Xariiqeysa In Al-Shabaab Ku Guuleysaneyso Dagaalka. W/Q Hilaal Colaad
Ka hor inta aanu nuurka Islaamku ku faafin qabiilladii Carbeed ee Nabiga SCW lagasoo saaray waxay ahaayeen dad aad u hooseeya, ilbaxnimadooduna liidatay marka lala barbar dhigo boqortooyooyinkii Faaris iyo Ruum.
Nus qarni kadib Dadkii raacay xaqa islamarkaasna qaatay Diinta Islaamka waxay furteen Faaris iyo Ruum waxayna noqdeen mid ka mid ah Dowladaha ugu tunka weyn ee Caalamka.
Muslimiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaatka islaamiga ah waxay kulansadeen asbaabtii u suurta galin laheyd in ay qabsadaan mandiqada Bariga Africa, islamarkasna ka dhigi lahayd quwad Islaami ah oo ka hanaqaadda qalcadda koofureed ee Muslimiinta.
Shan Arrin oo muujineysa ifafaalahaas ayaan hoos ku faaqidayaa.
Ummada Soomaaliyeed ee ku nool wilaayaatka islaamiga ah waxay ka koobantahay qeybaha kala duwan ee bulshada sida; oday dhaqameed, Sheekh, Askari, Xaakim, Sarkaal Police, macallin, Abwaan, ganacsade, dhaqtar ,wariye, iyo siyaasi dhamaantood ku mideysan hal maamul oo ay ku wada qanacsanyihiin.
Dadkaas aan soo sheegay dhamaantood waxay qabaan Afkaar isku mid ah, waxayna leeyihiin cadaw isku mid ah, sidoo kale waxay arkaan xal isku mid ah oo ah Jihaadka iyo ku dhaqanka shareecada.
Madaama bulshadaan ay wajaheyso duullaan adag oo kaga imaanaya cadaw Shisheeye iyo mid gudaha ah waxay ku jiraan baraarug taasi oo ka dhigeysa kuwo si aad ah u darsa funuunta dagaalk, sidoo kale naf hurka ay bixinayaan wuxuu jiilka soo socda ka dhigayaa kuwa diyaarsan islamarkaasna ku firfircoon dagaalka.
Jiilka halkaan kasoo baxa wuxuu ka taya badnaan doonaa jiilka kasoo baxa dhul dulmi, qabyaalad, musuqmaasuq iyo isku awood sheegasho ay hareeyeen dadkuna ay iska hurddaan.
Bulshadaan iyo maamulkoodu waxay iska xakameeyeenTelefoonada Kaamirada leh, telefeshinnada, iyo Internetka, marka laga reebo sida wanaagsan ee loo adeegsan karo waxay saameyn xun ku leeyihiin dhaqanka iyo dhowrsanaanshaha Akhlaaqda wanaagsan ee ummadda.
Sidaas darteed Jiilasha usoo kacaya bulshadaan waxay ka badbaadayaan fasahaadka iyo diinta la’aanta ay xumbaarsanyihiin waxaa loogu yeero ‘ Baraha bulshada iyo sidoo kale filmaanta, musalsalada iyo dhammaan anshaxa xumada.
Bulshadaan guurka ayay badiyaan dhalinyaraduna waqti hore ayey guursadaan; tani waxay siyaadineysaa tarankooda waxayna yareeneysaa Zinada iyo fawaaxishta. Halka ummada inteeda kale ay guurka daahiyaan sidaasna ay ku faafaan xumaanta iyo fisiqiga.
Markasta oo ay xadaaraduhu dagaallamaan waxay qolo kastaa isku dayaysaa in ay iska caabiso qolada kale ama ay ka qaalib noqoto, si ay isaga dhiciso waxay u baahantahay hubka iyo aaladaha ay isticmaaleyso aalado u dhigma ama ka casrisan in ay la timaado.
Dagaalka u dhexeeya Muslimiinta iyo cadawga faraha badan ee isticmaalaya Technologyada sarreysa waxay bulshadaan ku riixaysaa in ay la timaado awoodda iyo technologyada cadawga mid u dhiganta ama ka sarreysa.
Markii aad isku soo xooriso horumarka ay Al-Shabaab ka sameysay sirdoonka, dhaqaalaha iyo warbaahinta 10-kii sanno ee lasoo dhaafay haddii aad uga tusaale qaadato 10-ka sanno ee soo socota waxaa halkaas kasoo baxaya horumarka ay bulshadaani ku talaabsaneyso.
Wax barashadu waxay kamid tahay meelaha ay bulshadaani xoogeeda galiso si ay soo saraan jiil u babac dhigi kara cadawgooda. Goobaha waxbarashada waxaa lagu darsaa taariikhda ifaysa ee islaamka iyo muslimiinta, waxay nooleynayaan shacaa’irtii cilmiga islaamiga ah ee cadawgu naga duugay.
Dad badan ayaa laga yaabaa in ay rumeysan yihiin in aan wilaayatka laga baranin cilmiga maadiga ah balse si daas badalkeeda ummadaani waxay ku tashaneysaa in muddo gaaban gudaheeda ay soo saarto technologiyad u dhiganta tan shisheeyuhu isticmaalo.
Sidoo kale waxay heystaan warbaahin ku saacideysa barashada cilmiga si xaqiiiqi ahna ugu soo tabineysa wixii caalamka ka dhaca iyagoo la maldihin ama aan la marin habaabinin.
Aragti Caalami Ah:
Sida lagu yaqaano Muslimiinta, bulshadaan Muslimka ah waxay leedahay aragti caalami ah, waxayna indhaha ku haysaa gabood fallada ay la kulmayaan walaalahooda reer Filistiin, Kashmir, Rohinga, Turkistaanta bari iyo dhammaan meel kasta oo ay dad muslimiin ah ku dhibaateysanyihiin.
Bulshadaan Muslimka ah iyo Maamulkooda dulmi diid ka ah ma aqoonsana calaamadaha iyo xariiqaha uu gumeystuhu calaamadeeyay, mana jirto xuduud iyo xariiqtin dhulka korkiisa ku taala oo Muslimiinta ka hortaagi karta in ay dhulkana furtaan. Tani waxay soo dadajineysaa in Muslimiintu ay ka taqalusaan awoodaha kale ee gobolka.
Markaad u fiirsato sababka jiilkii hore ee saxaabadu a ku heleen furashooyinka waa in ay adduunyada ka doorteen aakhirada. waxa ugu qaalisan oo ay raadshaana ay ahayd Shahaadada, naftooda u duleeyeen Allah oo kaliya camalkana isaga u khaalis yeeleen.
Hadaba bulshadaan Muslimka ah dhalinyaradoodu waxay u kala dheereynayaan Shahaadada, waxay fahmeen fadliga ribaadka, waxay jarayaan xuduudaha, walohoodana waxay siinayaan Muslimiinta oo kaliya.
Sidaba aan lawada soconno deegaannada kale ee Soomaalida waxaa aad ugu faafay fuxshiga iyo foolxumada, waxaana aan arki karnaa in Jiilashii usoo kacay ummadahaas in ay kufsanayaan gabdhaha, maandoorayahana ay aad u isticmaalaan.
Ugu danbayn Dadka Muslimiinta ah waxaa wanaagsan iney fahmaan farqiga isla markaasna ubadkooda ka badbaadiyaan fool xumada kasoo socota deeganada uu shisheeyuhu heysto.
Tayada jiilka ayaa go’aamineysa cida dagaalka ku guuleysaneysa, shaki kuma jiro in Jiilka usoo kacaya Al-Shabaab uu ka taya badnaan doono jiilka kasoo hana qaaday deeganada kale. Dadka wax darsa iyo kuwa wax qora waxaan usoo jeedin lahaa iney si qoto dheer u darsaan horumarka ay ku talaabsanayaan Muslimiinta ku dhaqan Wilayaatka islaamiga ah.